Dibadbax looga horjeedo ku been abuurashada Al-Shabaab ee odayaasha dhaqanka oo Muqdisho ka dhacay + Sawirro | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Sawirro » Dibadbax looga horjeedo ku been abuurashada Al-Shabaab ee odayaasha dhaqanka oo Muqdisho ka dhacay + Sawirro
Dibadbax looga horjeedo ku been abuurashada Al-Shabaab ee odayaasha dhaqanka oo Muqdisho ka dhacay + Sawirro
Posted By admin On 25th January, 2014. Under Sawirro |
Dibadbax looga horjeedo shirkii Al-Shabaab iyo odayaal ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ku dhex maray Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Warta Nabada.
Dibad baxan oo ay ka soo qeyb galeen dadweyne fara badan, Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir iyo xildhibaano ayaa waxaa soo qaban qaabisay Hey’adda CCD, waxaana dadweynaha ka soo qeyb galay dibad baxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo kala duwan.
Dadweynaha bannaan baxayay oo socod ka soo bilaabay Iskuulka 15-ka May ee degmada Warta Nabadda ayaa isugu soo ururay xarunta degmadaasi, waxaana halkaasi khudbado kala duwan uga jeediyay madax ka tirsan degmada Warta Nabadda, Degmada X/Jajab iyo maamulka Gobolka Banaadir, Xildhibaan C/llaahi Sh. Ismaaciil, Caaqil Xasan Cilmi yaxye iyo xubno kale.
Guddoomiyaha Degmada Warta Nabadda Deeqo C/qaadir Axmed oo ugu horeyntii halkaasi ka jeedisay khudbad furitaan ah, ayaa sheegtay in Cali Dheere uu yahay ninkii ku lugta lahaa xasuuqa shacabka Muqdisho, isla markaana maanta uu maciin bidayo in dadkii uu shalay xasuuqay maantana leeyahay waan wadahadalnay.
“Hawiye ma ahan xaabo dabka lagu shito, Cali Dheere dadka Soomaaliyeed way ogyihiin wuxuu yahay, mana aha maanta inaad qabiil ku gambatid” ayay tiri Deeqo C/qaadir Axmed Guddoomiyaha Degmada Warta Nabadda oo sheegtay inaysan jirin beel Hawiye oo Al-Shabaab la kulantay ama heshiis kula gashay inay ku taageeraan fikradahooda.
Guddoomiye Deeqo ayaa sheegtay in haddii Cali Dheere iyo kuwa ku fekerka ah ay Dowladda isku soo dhiibayaan shacabka ay soo dhoweynayaan, hase yeeshee waxay sheegtay in maanta qofka ku fikirka Cali Dheere ay yihiin kuwo lunsan.
Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay Guddoomiye K/Xigeenka amniga gobolka Banaadir Warsame Maxamed Xasan Joodax wuxuuna sheegay in hay’adda CCD uu uga mahad celinayo abaabulka kulamada iyo dibadbaxyada shacabka ay uga hortegayaan falalka lidiga ku ah ammaanka iyo Shabaab oo uu sheegay inay iyagu ka soo mareen dhibaatooyin kala duwan.
“Dowladda iyo shacabka oo isku duuban waxay iska xoreynayaan kooxaha Shabaab ee dhibaatada ku haya” ayuu yiri Warsame Joodax oo sheegay in ka maamul ahaan ay ka go’an tahay inay Muqdisho ka xoreeyaan maleeshiyaadka Shabaab oo tallaabo cad ka qaadaan, kuwa dhulka qaraxyada gelinaya ee gaadaya dadka sidii ay u dili lahaayeen.
Waxa uu sheegay Guddoomiye K/Xigeenka gobolka Banaadir Warsame Joodax in magaalada Muqdisho ay ka dhigayaan magaalo nabad ah, isla markaana ay soo gabagabeynayaan kuwa falalka amni daro ka wada ee ku dhuumaaleysanaya magaalada Muqdisho.
Guddoomiye K/Xigeenka odayaasha dhaqanka beelaha Haweiye Caaqil Xasan Cilmi Yaxye oo ka mid ahaa xubnihii ka soo qeyb galay dibadbaxa looga horjeedo Al-Shabaab ayaa sheegay in been aan sal iyo raad toona lahayn ay tahay in kulan dhex maray Al-Shabaab iyo odayaasha beelaha H/gidir, wuxuuna sheegay in Al-Shabaab aanay marnaba la heshiin doonin.
“Al-Shabaab ha soo dhoweysanina, ma aha wax la soo dhoweysto waxay ku jiraan xilligii rafadka oo neefka markii la gowraco uu awooda iska raadinayay” ayuu yiri Caaqil Xasan Cilmi Yaxye oo sheegay mar kale in beesha Habargidir aanay wax kulan la yeelan Al-Shabaab.
Waxaa kale oo halkaasi ka hadlay Guddoomiyaha Degmada Xamar Jajab Maxamed Cali Axmed, wuxuuna sheegay in Al-Shabaab maanta ay ku been abuuranayaan beelaha Soomaaliyeed oo shalay ay dilayeen inay maanta yiraahdaan waan la kulanay, wuxuuna shacabka Muqdisho ku booriyay inay ka baxaan cabsida isla markaana ay la shaqeeyaan Ciidamada amniga.
“Haddii aad cabsataan cadowga Shabaab fursad ayay u tahay, waa dhammaatay xilligii ay dadku cabsanayeen” ayuu yiri Guddoomiyaha Degmada Xamar Jajab oo ugu baaqay shacabka Muqdisho inay hurdada ka kacaan ayna ka hortagaan shirqoolada kooxda Al-Shabaab.
Xildhibaan C/llaahi Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii halkaasi ka jeediyay khudbadda xiritaanka dibadbaxa looga horjeedo been abuurka Al-Shabaab ee odayaasha dhaqanka, wuxuuna hoosta ka xariiqay inaysan nabad jiri karin hadaan la helin shacab iyo Dowlad isku duuban oo wada shaqeyn ballaaran ka dhaxeyso.
“Waxaan ugu baaqayaa Xildhibaanada iyo shacabka Soomaaliyeed inay u halgamaan sidii dalka nabadda iyo horumarka loogu soo celin lahaa” ayuu yiri Xildhibaan C/llaahi Sh. Ismaaciil oo sheegay inaan la gaareynin yoolka la hiigsanayo hadii shacabka iyo Dowladda kala qoqoban yihiin.
« Xafladda caleemo saarka Madaxweynaha Puntland oo caawa ka socota Garoowe
Ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab ku dagaalamay duleedka magaalada Boosaaso »